Best 24 Chirwere Chechi Tattoos Chirongwa Chimiro Kwevarume nevakadzi - Tattoos Art Ideas
Best 24 Dumbu Zviratidzo Zviratidzo Zvevarume nevakadzi
sonitattoo December 1, 2016
Muchiitiko chaunenge uchitarisana nekugadzirisa muviri wako, pane mavara pamuviri unogona kukupa maitiro akanaka aunoda. Kana iwe une tattoo yemudumbu seyizvi, munhu wose anotarisa kutarisa kwauri kana une chimwe chinhu chakafanana neizvi.
1. Ane simba uye ane mavara anovaraidza mudumbu inonzi ink pfungwa yevarume
2. Tiger tattoo padivi rechecheche musikana
Zviratidzo zvemudumbu zvevakadzi zvinoshamisa, unoona mumwe munhu achiuya ane tattoo tema pa # stomach uye iwe unoshamisika kuti munhu uyu akasika sei. Iwe hausi iwe unofarira iyi tattoo here?
3. Zvisikwa uye zvine ruvara wembatya chiso chepatike tattoo design pfungwa yevakomana
Ichi chirwere #tattoo chiri nyore kupfuura iwe ungangodaro unofungira uye unoda chete zvinhu zvishoma izvo zvinowanikwa nyore nyore kubva munzvimbo dzakawanda. Chinhu chokutanga chaunoda kuita ndechokuti uwane vhidhiyo vakanaka vanogona kukubatsira nekutora. Yechipiri ndiyo yakarongwa yaunofanira kuwana.
4. Kubata skull mudumbu tattoo ink pfungwa kune vakomana
Chiratidzo chemukati chakanaka chimiro pakati pezvakanakisisa zvezvose zvinyorwa. Pane dzimwe nguva patinoda kubva kunze kwenzvimbo yedu yenyaradzo uye tinoshandisa matanho akadai.
5. Kubata uye kuve nemuvara wepatiki tattoo pfungwa yevasikana
Unogona kutora pfungwa dzako pamapepa usati waipa pfupa rako paganda rako. Dumbu chimwe chezvikamu zvemuviri izvo zviratidzo zvinotaridzika zvinotonhora zvinoshamisa kunyanya kana iwe une pfungwa yekusika kusanganisa zvisikwa zvako zvose muchikamu chimwe chete.
6. Killing moyo cool tattoo design pfungwa pamuviri
Vasikana vaizoda izvi tattoo nekuda kwemaonero ayo. Nenguva dzakawanda, takaona vazhinji vevakadzi vanoshandisa tattoo iyi iyo yakajeka zvikuru kuona.
7. Chimiro chine mavara machena anotarisa tattoo kugadzirwa mudumbu
8. Cool butterfly tattoo ink design pfungwa pamuviri
9. Kuchena tattoo yakagadzirirwa kumusoro
Iko rudzi rwechiratidzo chemudumbu nderesi yepasi uye haasi vose vanogona kuitora. Apo uri kuedza kutora utongi hwehupoteredza yako, tattoo #design chimwe chinhu chausingakwanisi kuita kunze.
10. Blue feather tattoo design pfungwa pamativi emudumbu
11. Inoshamisa gondo gumbo tattoo ink pfungwa kune varume
Hapana anoona tattoo yemudumbu uye haadi kuda kukupa chikwereti nekuda kwechimwe chinhu chakanaka uye chinoshamisa. Iwe unogona kutaurira kuti chimiro ichi chinyorwa chinoshamisa kwazvo uye chakanaka.
12. Cool peacock tattoo ink pfungwa pamativi emudumbu
13. Wolf yakatsamwa chiso, chimiro chemuviri chishuwo chakanakisisa pfungwa yevasikana
Funga nezvekuti iwe unowana tattoo yemudumbu semukadzi uye munhu wose anoda kuti iwe urambe uchiratidza, izvi zvinokuita kuti unzwe sei? Zviratidzo zvemudumbu zvinouya zvakasiyana siyana zvakagadziriswa uye ukuru. Paunenge uchida kuinwa, tanga nekodhi yekugadzira iyo inoita kuti iwe uve wakasiyana.
14. Mifananidzo yakafuridzirwa mumuromo inki design pfungwa yevarume
15. Mifananidzo yakafuridzirwa inobva mumagadzirirwo emudzimai pfungwa yevakadzi
Panguva iyo paunotsvaka zviratidzo zvemudumbu, tora nguva shoma yekutsvakurudza kana iwe uri mukadzi uye uwane simba rinogadzirisa dumbu rine mavara uye rine zvinoreva zvakawanda zvakabatana naro.
16. Tattoos parutivi rwemuviri pfungwa yakakwana yevasikana
17. Nyeredzi yakanaka uye mwana mutumwa tambo yakagadzirwa pamusikana wepamu
18. Mwoyo wekodhi yakagadzirwa pamativi emudumbu
Kana iwe uri mukadzi uyo ari kutsvaga chimwe chinhu chiri nyore uye chinotonhorera, zvakanakisisa kuti iwe unoenda nokuda kwechitema chemukati izvo hazvirevi kutadza muziso. Mifananidzo yakajeka yakave yakave iyo mafashoni amai vaanoshandisa kushandisa mudumbu ravo.
19. Muchinjikwa uye Butterfly mutezo wemuviri pfungwa yevakadzi
Chirwere chikuru chemukati chakave chimwe chinhu chausingadi kuzvidzivirira kana uri kufunga nezveinki iyi yakagadzirwa.
20. Dumbu re tattoo pfungwa yekuvhara zvinyorwa
21. Chimiro chemukati chinonzi chikonzero chevasikana
22. Flower tattoo kugadzirwa kune rumwe rutivi rwemimba
23. Tiger dumbu tattoo ink design pfungwa yevarume
24. Mhuka nemaruva mudumbu tattoo design art for girls
cat tattooschifuva tattooshenna tattoocherry blossom tattoozuva tattooszodiac zviratidzo zviratidzocouple tattoosmwedzi tattoosrudo tattoosmaoko tattoossleeve tattoosGeometric Tattoosrose tattoosbutterfly tattoostattoo yezisobirds tattoosrip tattoosFeather Tattooneck tattooscross tattoosAnkle Tattoosmimhanzi tattooselephant tattooHeart Tattoostribal tattoosAnchor tattooswatercolor tattoofoot tattooshanzvadzi tattooslotus flower tattootattoo ideasangel tattoosshumba tattootattoos for girlsscorpion tattooarrow tattookorona tattooskoi fish tattooback tattoostattoos kuvanhumehndi designflower tattoosarm tattooseagle tattoosshamwari yakanakisisa tattooscute tattooscompass tattooinfinity tattoooctopus tattoodiamond tattoo